Eziokwu nke Ndị Agadi Agadi na Ntanetị, Figures, and Statistics | Martech Zone
Echiche ndị okenye na-enweghị ike iji, nghọta, ma ọ bụ na-achọghị iwepụta oge n'ịntanetị zuru ebe niile na obodo anyị. Otú ọ dị, ọ dabere n'ihe ndị mere eme? Ọ bụ eziokwu na Millennials na-achịkwa ojiji Internetntanetị, mana enwere obere ụmụaka Boomers na ntanetị ụwa?
Anyị echeghị otu ahụ, anyị na-achọ igosipụta ya. Ndị agadi na-anabata ma na-eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ eme ihe n'ọnụ ọgụgụ na-aba ụba n'oge a. Ha na-amata uru dị n'ịmụta etu esi eji laptọọpụ, ekwentị, na ọbụnakwa tinye n'eziokwu.
Lee ụfọdụ ihe n'eziokwu nke gosiri gị eziokwu nke otu ọgbọ ndị ochie na ọha mmadụ taa si eji Internetntanetị.
Ole na ole
Ọnụ ọgụgụ nke ndị agadi nọ na ịntanetị dị ezigbo elu. Ya bụ, ọ dịkarịa ala 70% nke ndị agadi 65 na n'elu na-etinye oge ụfọdụ n'ịntanetị kwa ụbọchị.
Ná nkezi, ọgbọ ochie na-etinye ihe dị ka awa 27 na ntanetị kwa izu.
Medalerthelp.org, Ndị Agadi & World Wide Web
Ọzọkwa, ndị agadi achọpụtawo abamuru kasịnụ nke Intanet — nnweta ohere inweta ihe ọmụma a na-akparaghị ókè! Ya mere, nnyocha na-egosi na ọ dịkarịa ala 82% nke ndị agadi na-eji engines ọchụchọ ịchọta ozi na isiokwu ha nwere mmasị.
Imirikiti ndị okenye na-enyocha ihu igwe
Otu n'ime isi ihe mere ndị agadi ji aga n'ịntanetị bụ ịlele ihu igwe (gburugburu 66%). Ọ bụ eziokwu amara nke ọma na okenye ka ị na-enwekwu mmetụta na ị ga-abụ mgbanwe mgbanwe ọnọdụ ihu igwe, yabụ ịlele ya n'ịntanetị bụ ụzọ dị mma iji nọrọ na njikere.
Ma, ndị agadi na-eji forntanet eme ihe ndị ọzọ. Offọdụ ndị a na-ahụkarị gụnyere ịzụ ahịa, ozi gbasara nri, egwuregwu, Kupọns na mbelata ego, yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ndị Agadi Ha Na-ekwu Okwu n'thentanet?
Echiche ọzọ anyị nwere gbasara ndị agadi gbara anyị gburugburu bụ na ha ka na-adabere na ekwentị iji kpọtụrụ ndị enyi na ezinụlọ ha. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ eziokwu maka ụfọdụ, ọ gbasaghị ebe niile dịka ụfọdụ ga-eche
Zọ ụzọ atọ esi ekwukọta n’Intanet bụ ozi-e, ozi ndị na-ezisa ozi na ihe ndị ọzọ. Ihe dị ka 75% nke ndị okenye na-ekwurịta okwu na ndị ezinụlọ ha site na iji opekata mpe ngwa izipu ozi. Abụọ ndị na-ahụkarị bụ FaceTime na Skype ebe ọ bụ na ndị a na-eme ka ọ dị mfe iji nkwurịta okwu na vidiyo na izipu ihe oyiyi.
Olee Ngwaọrụ A Na-ejikarị Eme Ihe?
Ọ bụ ezie na anyị emeela ọtụtụ ụzọ iji mee ka ndị agadi na teknụzụ bịaruo nso, a ka nwere ohere imeziwanye. Dịka ọmụmaatụ, ekwe ntị mgbe niile ka dịkarịrị n'etiti ọgbọ ochie ma e jiri ya tụnyere ama. Nke dị elu ị na - aga n’iru afọ, ka ọdịiche dị n’etiti ojiji nke ekwentị na ekwentị ka ibu.
Dịka ọmụmaatụ, 95% nke ndị agadi 65-69 na-eji ekwentị, ebe 59% na-eji ekwentị. Otú ọ dị, 58% nke ndị okenye karịa 80 na-eji ekwentị, mana naanị 17% na-eji ekwentị. O yiri ka smartphones ka na-atụ ndị agadi ụjọ, mana usoro ndị a ga-agbanwe n'oge na-adịghị anya.
Nọmba Ndị A Na-atụ Anya toba Ọdịnihu
Nọmba ndị metụtara Intanet na ndị agadi na-agba ume ugbua. Agbanyeghị, a na-atụ anya na ha ga-eto ngwa ngwa n’ọdịnihu dị nso. Dika umu agbogho ndi n’etinyego iwu oma banyere teknuzu ohuru na-aka nka, onu ogugu ndi okenye ndi guru akwukwo nke igwe ga-eto kwa.
Maka ịmatakwu nghọta banyere isiokwu a, lelee ozi infographic ndị enyere site na Medalerthelp.
Tags: ịntanetị ojijiọnụ ọgụgụ ekwentị mkpanaakaekwentị mkpanaakandị okenye
Nikola Djordjevic, MD, Isi nke Ọdịnaya na MedAlertHelp.org. N’ịbụ onye si Serbia bịa, Nikola bụ dibia bekee nke bidoro ọrụ a na 2018 n’ihi oke mmasị ya n’inyere ndị ọzọ aka, ọkachasị ndị okenye. Ewezuga nyochaa usoro ịdọ aka na ahụike, ọ na-edekwa blọọgụ raara nye ahụike, ịka nká, ezumike nka, na isiokwu ndị ọzọ metụtara ndị okenye.